Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland oo ka hadlay qorshe sanadeedka 2012 ee wasaaradda – Radio Daljir
Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland oo ka hadlay qorshe sanadeedka 2012 ee wasaaradda
Garowe,Jan 15 -Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha dawladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Cabdulaahi Saciid Aw-Yuusuf oo u warmayay Radio Daljir ayaa sheeegay in wasaaraddu meel wanaagsan ka gaartay dhamaystirka howlaheeda assaasiga ah ee sanadkii lasoo dhaafay.
Agaasimaha ayaa waxaa uu sheegay in wasaaraddu guul ka gaartay dhamaystirka howlo muhiim ah,kuwaas oo ahayd in lasoo dhamaystiro sanadkii aan soo dhaafnay,waxaana uu sheegay arimaha wasaaraddu ay ku guulaysatay sanakii tagay inay ka mid yihiin.
Xalinta khilaafaadka beelaha dirirtu dhexmarto oo wasaarudu meel marisay ayna xalisay khilaafaad beeleed taagnaa guulna laga gaaray.
In meel wanaagsan wasaaraddu gaarsiisay maamul baahinta.
Gaaritaan dhulka fog ee Puntland iyo in mashaariic hormarineed laga sameeyo deegaanadaasi.
Dajinta siyaasadda barakacayaasha Puntland lana soo gaba gabeeyay.
Wasaarada ayaa ku howlan qorshayaal ay ugu tala gashay inay fulaan sanadkan,kuwaas oo uu sheegay agaasimuhu inay doonayaan dhamaystirkooda.
Xalinta khilaafaadka beelaha
Dhisida golayaasha deegaanka qaar kamid ah degmooyinka Puntland ee aan wali loo sameyn goleyaal deegaan.
Dhamaystirka xeer ay yeeshaan barakacayaasha Puntland
Wasaaradda ayaa waxaa ay wadaa qorshe ay nolol buuxda oo la siman tan dadka u dhashay deegaanada Puntland lamid ah ay ku helayaan dadka barakacayaasha ah ee kasoo cararay dagaaladii ugu dambeeyay ee koofurta dalka.